DAAWO-Madaxweyne Qoorqoor oo ka hadlay shirka Muqdisho, mowqifkiisa,xiriirka Puntland iyo arrimo kale.
September 15, 2020 Xuseen 19
Madaxweynaha Dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, ayaa hadal-jeedin ka sameeyey kulan gaar ah oo ay iskugu yimaadeen Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa Aqalka Sare la wadaagay warbixin ku saabsan Xaaladda iyo howlihii ka qabsoomay Galmudug asagoona is dul taagay arrimaha Dib-u-heshiisiinta bulsho iyo Siyaasadeed, amniga iyo iskaashiga Dowladaha xubnaha ka ah DFS iyo shirarkii lagu marti geliyay Dhusamareeb loogana arrinsanayay arrimaha doorashooyinka qaran
Qaar kamid xubnaha guddiga joogta ah ee aqalka sare ayaa su,aalo weydiiyey madaxweynaha GM, isagoona si waafi uga jawaabay.
Kulankan oo uu shir guddoomiyey g
Guddoomiyha Aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi C/lahi, waxaan ka qeybgalay ku xigeenadiisa 1-aad iyo 2-aad, Xubnaha Guddiga joogtada ah iyo qaar kamid ah gollaha xukuumadda Galmudug.
Hadaan daarood ahey aadban uga cabsan lahaa ninkan, hooy hadaba taxadir sii gala. ninkuu digey kumuu dilin, mudane qoorqoor waa digircun siyaasada liqey oo dagaankisa usoo baxey
aanis raacsadee Denny zensibari iyo ahmed jabhad siyasad waxkama oga
Iidoor boy, mooryaanka aad nagu xuuxinayso 30kii sanadood ee uu koonfurta qasayay Puntland 100km ayay u jirtay, in uu hal shibir dhulkeeda ka qabsado na xabeenkii xalay ahaa ayay ka noqotay si kasta oo uu iskugu dayay. Qoladan Dhiigshiil baa hoosaasin iyo hud-hutayn u biila oo suuradhka u soo labbisay ee annaga agteenna waxba ka ma aha ee la socda iidooroow.
Waa idinka xaqiirnimada Siciid Deni “Sinjibaari” ugu yeera ee, bal sawirkan kore qummaati u dheeho labada isbarbar taagan kan Kabila shabbahaya (qoorqoor) iyo kan ay dhabannada xariirta ah ee Soomaaliyeed ku yaallaan oo kan kale ka sii cass (Siciid Deni). Isir-neceybka Daarood baa dhaahaya idin tiray oo idin ka hadaajiya ee joojiya xaqiirnimada indhahala’.
Aan israacsado ee sawirka videogan kore marka ay indhuhu qabtaan waxaabad mooddaa Eddie Murphy.
Duli Hargaysa Boy iyo AWLAL:
War fadhi ku durirka aan dhamaan oo aan wax micna ah lahayn iska daaya.
Soomaali way midoobi wayna ka raysan maamulada qabaa’ilka ee dalkii iyo umaddii meesha liidata dhigay.
Awlal, ninkii la baxa Hargeisa ma Iidoor baa, bal taa iska hubi, annagu Deni madaxweyne sharaf leh weeye iyo uguma yeedhno Senjibaar iyo wax kale toona, ma aha afkayagii, waxaan ka maqalaa, Walaalihiin Leylkase iyo Mareexaan oo waxaa ku hadla, oo bal fiiri ninka la leeyahay Maxamed Cali, Idil Farmaajo maanta fiiri iyo gabarta wacasha ah ee Leyl Kase iyaga ayaa waxaa shuba, oo yidhaahda Ahmed Madobe waa Kenyan, waa Oromo, dalka uma dhalan, Denina waa Zenjibaari, annaga 2daba sharaf bay naga mudan yihiin, waana rag cadkooda soo dhacsanaya,
Àli jàmà,Daaoodku sidàa ayey isu caayaan berri markii dameer yar zoo dhex galo way heshiiyaan,ha is caayaan,adigu iska daawo ka dhex bax,duqsi haa noqon.
Binti- Girl , waxay tiri Qoor qoor yaaa i arooosay.. Ceeb weynaaaa.
Binti- Girl.. waxay tidhi Qoor qoor ayaa i aroosay…. Ceeeb , weynaaaaa
Guuur wacan… Binti -girl iyo Qoor qoor.
Saaxiib, nin iska daacad ah ayaad tahay sidii aan horay kuugu sheegay, laakiin meeshan waxaa iksu haysta daalimiin duullaan qaawan bedkayaga noogu soo dhaacay iyo annaga oo iska difaacayna.
Cayayaanka sidooda ba salsalaaxid kaaga ma baxaan ee waa la iska buufiyaa. Waxaan aniga la i tusin daalim dulmi ku taagan oo haddana isla sii gar leh. In laga aamuso oo gardarrada laga qaato na diiniyaan iyo dad ahaan ba waa qalad iyo wax aan suuraggali karin.
Ina Cilmiyoow, qarannimada guud ee la wadaago ka sokoow, Soomaalidu degaanno sii kala fidsan ayay qabaa’il ahaan u kala deggan yihiin, waloow inta badan oodwadaag la yahay. Xaqiiqadoo aan marna la inkiri karin ama la huri doonin baa jirta, taas oo ah in ay bina-aadamku, xayawaanku, iyo xasharaadku ba meelaha ay oo koox koox ugu nool yihiin ay dabiici tahay in ay “ismaamul” sameystaan.
Anigu ma garanayo Soomaaliya meesha aad ka soo jeeddo laakiin xusuusnoow in Soomaalida oo qaran iyo dowlad ku hoos dhaqan ay USC iyo SNM dagaal qabali ah ka dhex qarxiyeen oo natiijada ka yeelay in uu qabiil kasta belaayada buulkiisa ka galo oo sidaas lagu kala faquuqmo.
Waxaa fajiciso noqotay in ay isla kuwii Soomaalinimada golmudan dacarta ku daray weli wax sii jaa’ifeysanayaan oo ay isla sii gar leeyihiin. Soomaalinimada annaga ayaa abidkeed u taagnayn oo dabada ka riixaynay, annagii ayaa na ku ammaan heli waynay.
KKKKKKK waa Eddie Murphy oo wax yar dheer lagama yaqaano..
Aflagaadada halla joojiyo; waa amar MADAXWEYNE!
KAMAU/TESFAYE, saw anigii kugula taliyey in aad dhalinyaradayada meesha uga dhex baxdo oo aad masaajidka ku uruurto illeen da’deedii baad gaadhaye. Dhalinyaradeena meesha uga bax; waxa aad haysaa feker QADIIMI ah, oo wakhtigiisii la soo dhaafay.
kkkk hillaac anoo intaas hore akhrinaaya baa soo gashey waxaa tahay qof jiran kkkkkk kkkkkk. suldan awlal baa adiga kuu dhameeyey sxb waxbo kuu ma harin inaa is sirqisid maahanee. waa adiga waxa duqa goboobey ah oo dawlad dhexe iyo waxaan loo joogin caliyada kaaga daadaneyso kkkkk kkkkkk. duf ku bax.
Waxaan anigu ka helaa marka ay munaafiqiintu dadka kale ugu yeedhaan waxay yihiin iyo wax kasii daran. Sababtuna waa iyaga oo karbaashka aan karbaashi doono iisii xalaaleeyay. Dawlada uu ninkan Awlal iskugu yeedha imika een ana ugu daray Garab Adhi waa tii Afweyne ee wadankoo dhan kharibtay. Waa kow taasi. Saaxibayaal waxa caam ah in dunidan aanay dadka shicibka ahi si dhib yar nabadgelyo iyo badhaadhe iskaga kala tuurin. Si kastooy uga afxidhan yeehiin dheefo badan, hadii qofka bina’aadmiga ah uu helayo nabadgelyo iyo sifuhuu nolol maalmeedka caarkiisa usoo dhacsan lahaa isagaaba iska mashquula oonan suryo walba fitno ka eegin.
Dawladii Afweyne waxay gaadhay inay madaxdeedu ku dekeyso shicibka, askarteeduna kula kacaan fal dambiyeedyo bina’aadminimada aad uga fog. Intay iska dul yimaadaan ayay hablaha ka kufsan jireen inamadana ka leyn jireen, xoolaha ka dhici jireen, waayeelkana aflagaado, handadaad, jidh dil iyo dill caadi iskugu dari jireen.
Hadaba waxa jiray rag macaash ku qabay mashruucaas aadka u foosha xun. Iyaga iyo caruurahoodiiba heli jiray mushahar bilaash ah oonay u dhididin, tacliin heer sare oo aanay kasbanin, xilal iyo adeegyo sidii boqoradoo kalena u noolaan jirey. Mid walba oo odey ah oo qurbaha ku caarcaaraya kolkuu Soomaaliya ka sheekeynayo murugo ayaa qabata. Qoomamo uu qoomameynayo ficiladii xumaa iyo xaaraanta ku maqan kama qoomameeyaan oo aakhiro kama baqaan. Waxay ka qoomameeyaan noloshii wacneyd ee laga kala tuuray. Wadankoodii dahabka ahaa ee maanta meeshaas khariban jooga. Sharaftii iyo udugii ay iyaguuni ku naaloon jireen. Cakuyeey, cakuyeey, cakuyeey iyo ilin baas baa indhahooda kusoo istaagta. Kolkaas ayuu qofka wax ma garatada ahi la muruugoodaa. Adeer ama Awoowe waa rutnaa. Wadankii inagaa iska burburinay. kkkkkkkkkkkk
Jaw. Hada waa nimankii garan waayay, waar daaqa iyo jaqa oo jiifa, laakiinse dadkiinana u yara tudha oo nabad geliya uun. kkkkkk
Hadaba Garab Adhi saaxiibkeen waa kuwaas qoomamada dibadaha ugu qarwaya wax layaabkaas oo miidhan. Kuye Soomaali Qaran iyo Dawlad ku hoos dhaqan. Dhaqanida tollow ma waxa uu u yaqaan anigoo iyo aabahay iyo wiilkeyga oo jaqayna oo dadka ku amar ku taagleynay, ugu yeedhna xunyahow xunku dhalay, wax yahow dameerkiisu dhaamo iyo wax la mid iyo kii il qaloocan ku eega oo ay isha ka ridaan ama habeen madow jasiiro ama liido ku toogtaan ama badweynta Hindiya libaax badeedyada dadkii oo nool nool ugu tuuraan.
Garab adhiyoow daalinku waa adiga, waayo kii shalay jaqayay ee dadkana cabiibso ku taamayay ee maantana lahe wey dhaqnaayeen waa adiga. Waxa balan ah inaad weligaa ku riyooto waxaad heysan jirtay iyo malabkii doocaan eed iska muudmuud jirtey aanu adoon u dhididin kusoo gelin.
Munaafaqa meesha ugu weynaha waa adiga oo Afar Sanadood Warsangeli noogu dhaaran jiray inaad tahay oo imikana Majeerteen iska yeel yeelaya.
Imika yaa xunxunkii ah. Sow ma’ahan kuwiinii umada Soomaaliyeed ku kibrey ee ku balbalaadhay ee illaa iyo hadana weliba isla sii saxsan. Waayo markaanu caruurtayadii kaa korsan kari weyney, xaasaskayagii kaa qabi weyney, beerahayagii kaa falan weynay ayaanu intaanu kugu xeyraaney hawada adiga iyo xunxunkii xaaraanta kula dhuuqayay illaa iyo futo biciid ka ridney.
Ku naaloo nolosha qurbaha eed adigu is baday saaxiib. Ku naash naash ceydha iyo guryaha qudhmuun ee Dawladaha shisheeye ceydh ahaan idiin xareyso sidii xolihii. Soomaalina la qeybso meeshaas hooseysa ee ay aduunyada ka mareyso. Hase ka murugoon waxaad cuni jireen eed weydeen ee ka murugoo waxa aakhiro idin sugaya intiinii xaaraanta ku naaxnaaxdaya ama lagu soo koriyay.
Waar waa sidaas Hilaac kugula taliyaye orod oo Allehaagii ku uuntey u toobad keen oo Masaajidka ku dhameyso inta cimrigaaga ka hadhay.
Munaafaq iyo Doofaarba ma daahiro.
Anigu kolkaan arko qof Soomaali ah ama ha yaraado ama ha weynaado oo leh, waar walaalayaaloow wixii ina soo maray ina soo mar. Imikuun aynu is toosino waan u garaabaa. Waayo waxaan ogohay in uu qofkaas hadii uu xumaan jireyna imika soo miyirsaday oo inuuni weli ku hadhay shakhsinimo iyo cabsida Alle. Haduu yar yahayna ah qof garaad leh oo dhuuxay wixii soo dhacay rabana in nolol wacan ku naaloodo inta cimrigiisa ka hadhay isaga is Soomaalida kaleba. Si kasta oo siyaasadeydu tiisa uga soo horjeedo waxaan u qiraa kelmadaas wanaaga ah ee uu adeegsaday. Hadaan aan gaadhi kareyna niyada ayaan uga duceeyaa. Hadii hadalkeygu gaadhi karona ficliyan ayaan u duceeyaa.
Laakiinse kolkaan arko mujrim, munaafaq iyo mid walba oo xun oo weli qoomameynaya wixii uu heysan jirey iyo nacfigii xaaraanta ahaa ee ay isaga, qoyskiisa iyo inta ku xeerani jaqjireen ee laga kala daayiyayna waan ku digtaa oo waxaan ugu nuuxnuuxsadaa sida aan ugu faraxsanahay ciilkaambiga iyo qadhaadhka ay waalidkeygu badeen. Waxaanan u raaciyaa waan ka xumahay inaan yaraa oo aanan ficliyan dagaalkaas hilfaha loogu qaaday ee imika uu weli ka ooyayo inaanan da’ahaan soo gaadhin. Waayo anaba dacarta leefnaye waa in aan kol walba oo uu iloow is yidhaa ama is moodsii aan dib u dhadhansiiyaa.
Kuwaas macaanka jaqayay waxaan uga sii daranahay oo si xun ugu digtaa kolkaan arko doqon xun oon isagu dheef iyo dhiiqba ka helin isaga iyo qoyskiisu, laakiinse la ooya ama la muruguugooda wixii laga kala daadiyay kuwo qabiilkiisa ah oo uu caabudi jirey welina caabudayo. Kuwaasoo kale waan ku tiiqtiiqsadaa. Had iyo goorna waxaan ku kaakiciyaa cadhada, dacarta iyo dareemaha ku jira oo dhan. Waayo waa nacas. Waa wax ma garato aanan garan karin daalimiinta uu dabo dhukusayo. Nedel miidhan weyaan aan nololba garaneyn. Nolol aanan ka aheyn, tuu tolkiis u sheegiyo. Waxa ay kuwaasi wataan maskax madhan oo iney ku keydiyaan waxa loosheego mooyaane aanan wax kale u sidan. Kuba fikiri maayaan maankaas weyn ee Illaahay ku maneystay. Waxaba dhaama xayawaanka kala garan kara, kolkuu gaajoodo foof tag oo wax xun, kolkuu haraado u jaqaafi dhanku biyuhu kaa xigaa, kolkuu daalona naso oo fadhiiso meel hadhleh amaba seexo.
JAALLE Hanuuniye ma maqlaysaa?
Waxaan daawaday odayaal Marreexaan oo Madaxweyne Deni Caayaya. Midkood waa iska caddahay inuu yahay guulwadeyaashii Kacaanka laakiin waxaa layaab leh kan kale oo ah 80-jir garka cillaantay. Waxaa la yiri geel duqdiisii durdurisay, aarankiisa maxaad mooddaa?
Madaxweyne Deni ayey ku sheegeen Zanzibari, waxaase xiise lahayd ilaa ay Af Somali ku hadleen uma maleynayn inay Soomaaliba yihiin. Waxaan mooday Dinka ( qabiilka John Grang — South Sudan).
Dadku maba oga in dadka Zanzibar ku nool ka qurux badan yihiin, kana cas cas yihiin Soomaalida.
Midkood ku faanaya barwaaqada Gedo ayaa yiri: “Waxaan isku cunaa kurus iyo yaanyo.” Waxaan niyadda iska iri, ‘Illeen sideer u gubatay sidii aad kulaylka Gedo iskugu rudaysay jifi kurus iyo yaanyo!’
Mar kale isagoo baaxadda Gedo ku faanaya wuxuu yiri: “Gedo waa saddex kun oo kilomitir oo labojibbaaran (3000 square kilometers). Waxay ka dhigan tahay: 100km × 30km. Waa inta ay ku fadhido min Xamar ilaa Jowhar oo dherer ah iyo min Xamar ilaa Afgooye oo ballac ah! Oo Gedo sow ma ahayn gobolka Somalia ugu baaxadda weyn? Dabcan, wuu yahay. Ninkaasi intii uu durbaankii Kacaanka tumayey ee lahaa ‘ caynaanka hay’ haddii uu wax baran lahaa, maanta khaladkaa ma sameeyeen.
Waxaa muuqata hadalkii Deni ee ku saabsanaa imtixaanka dugsiga sare ee uu ulajeeday Goodax iyo Farmaajo in dadka qaarkiis oo ciil ay u qabaan Puntland la dibbirsanaa ay u noqotay ‘ anigoo inaan ooyo doonayey baa sac saynta igu dhuftay.’
Jaalle Hanuuniye, Marreexaan intooda maanta durbaanka u tumaysa Farmaajo gar iyo gardarraba, ha ogaadeen Puntland waxa ay ku doodayso ee u dhaliilsan tahay xukuumaadda maanta talada haysa, ma aha colaad ku jihaysan Farmaajo iyo Marreexaan midna. Xisaabtan iyo dooddan Farmaajo kahor ayey socotay, isaga kadibna waa socon doontaa. Waa qaabka iyo nooca dowladnimo ee Soomaaliyada mustaqbalka. Qoladii ku qanacsan sidii wax ahaan jireen 1991 kahor, waa yeelkadiis. Qoladii aan lahayn aragti iyo hiraal fog ee isku maaweelisa waddaninimo iyo midnimo dhalanteed ah, wixii ay ka hesho waa nasiibkeed.
Puntland mowqifkeedu waa: ‘Gacalada geedkaa inoo saar oo geela inoo qaybi.’
Marreexaanka inta Farmaajo u guulwadeynaysa waxaan xusuusinayaa hadalkii qori-ismarisku (waraabe-dadow) ku yiri ninkii ka talodiiday: ‘Shalay waad arrin xumeyd, xalayna waa orod gaabnayd, haddana waad aqoon xun tahay.’
Odàyaal iyo islaamo xanuunsan ayàan meeshan Ku shiraya,jaallayaal,Afweyne 21 sanadood ayuu Odin zoo xukumay,maantana wiilkii uu adeerka u ahaa ahaa Odin xukumo,SNM,SDF iyo USC maxaa idiin talk ah awsaakh yahay awsaakhdu dhashay,Farmaajo wuu joogayaa, was igu wallaah, we maanta xaggee baad u ordi doontaan? Kenya? Ethiopia maa doonayso in at zoo dhaweeso jabhad maanta,midday kale yaa idinku khasbay in aad Afweeyne wiil uu added u yahay Madaxweyne u doorataan? Adinkaa u Bashan zoo maa aha? Waayo tuugo isu timid ayaad tihiin, markii aad aragteen waddankii zoo dhismaya ahaa civil Odin qabtay aryàa iyo waaryee dee dee Mani INA afweyne,awsaakh awsaakh dhashay, non was!INA gobolkiisa ha aado,nagu kale wada meesha,thug yahay tuugtu dhashay.
Galnus hanoo xayeeysiinin, qoorqoor futada galnus ha asturo, ceyda iyo aflagaadadana iyo habaarka ha idin ku noqdee galnus.